एमाले गैँडाकोटको नेतृत्व टुंगाउने जिम्मा जिल्ला अध्यक्ष र इन्चार्जलाई – उज्यालो खबर
एमाले गैँडाकोटको नेतृत्व टुंगाउने जिम्मा जिल्ला अध्यक्ष र इन्चार्जलाई
नवलपुर ।नेकपा एमाले गैँडाकोट नगरकमिटीको प्रथम अधिवेशन मार्फत नयाँ नेतृत्वको टुंगो लगाउने जिम्मा अन्ततः जिल्ला ईन्चार्ज र पार्टि अध्यक्षलाई दिईने भएको छ । ७० जना नगर सदस्यहरु सर्वसम्मत रुपमा छनौट गर्ने देखिएपनि पाँच पदाधिकारीको अन्तिम टुंगो लगाउन एमाले नेताहरुलाई सकस परेको छ ।
१८ वटा वडाहरुबाट हालसम्म ६४ जना नगर सदस्यहरुको नामावली सर्वसम्मत रुपमा चयन गरि निर्वाचन कमिटीलाई दिइएको छ । वडा नं. १० र १३ मा बाहेक अरु सवै वडाहरुमा सदस्यहरुको सवालमा विवाद छैन । १० र १३ वडामा पनि आज साँझसम्म सदस्यहरुमा सहमती जुट्ने नेकपा एमाले गैँडाकोट नगरपालिकाका ईन्चार्ज यमुनाथ आचार्यले जानकारी दिए ।
सहमतिका लागि भन्दै आजदिउसो १ वजेसम्मको समय दिइएको भन्दै उनले सहमति नजुटे समय केहि दिन थपिने संकेत गरे । पार्टिको आन्तरिक चुनाव भएकोले कुनैपनि हालतमा बाक्सा थाप्ने काम हुदैन ईन्चार्ज आचार्यले भने : “अव पदाधिकारीहरुको टुुंगो लगाउने जिम्मा जिल्ला ईन्चार्ज र अध्यक्षले गर्नुहुनेछ।” जिल्ला अध्यक्ष रोशन बहादुर गाहा (मगर) र जिल्ला ईन्चार्ज समेत रहेका संघीय सांसद तिलक बहादुर महतको उपस्थितिमा भोलि साँझसम्म सहमति गरिने उनले बताए ।
अध्यक्ष पदमा हालसम्म ६ जनाले उमेदवारी दिने भन्दै निर्वाचन मण्डललाई चिट थमाएका छन् । हालका नगर अध्यक्ष षडानन्द लामिछाने, युवा नेता गिरीराज उपाध्याय, रामचन्द्र धिताल, राजु सापकोटा र यदुनाथ सिग्देलले अध्यक्षको चाहना राखेका हुन् ।
नगर कमिटीको उपाध्यक्षमा ९ जनाले चाहना राखेका छन् । नेकपा एमालेका युवा नेता एवंम् गैँडाकोट नगरपालिका वडा नं. ५ वडा अध्यक्ष नवराज कंडेल, वडा नं.१० का अध्यक्ष देवीदत्त कंडेल , ११ का वडा अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद सुवेदी, युवासंघका नेता होम बहादुर गुरुङ ले चाहना देखाएका छन् ।
नगर सचिव पदमा हालसम्म तीनजनाले उमेदवारी दिने बताएका छन् । अनेरास्ववीयूका नेता कमल तिवारी, निर्वतमान नगर सचिव जगन्नाथ पौडेल र लक्ष्मण कंडेलले सचिवमा दावी गरेका छन् ।